Maalintii Labaad & Shir-weynaha Kulmiye | Somaliland.Org
Maalintii Labaad & Shir-weynaha Kulmiye
March 30, 2008	Hargeysa(Somaliland.org)- Shirweynaha labaad ee xisbiga Kulmiye ayaa maalintiisii labaad si habsami ah uga socda Ambasaador Hotel ee Magaalada Hargeysa.
Reer togdheer waxay na soo fareen in in waxyaalaha ugu weyn ee togdheer saameeyay uu yahay dhaqaala xumo aad u halis ah, Walaw sicirka maciishaddu oo suuqa caalamka aad uga kacay, haddana reer togdheer waxay ogyihiin in cashuurta xaddhaafka ee Dulsaarka, iyo siyaasad xumida ganacsiga ee maamulka jira uu sicirbararka qaybta ugu weyn ka qaatay. saameeyayna noloshii bulshada reer togdheer iyo guud ahaanba dalka Somaliland daqiida , bariiska ,sonkorta,saliidii, iyo shidaalkii, qiimahay ahayd maalintii uu riyaale qabsaday dalka oo ahayd 4tii may 2002 Way labanlaabatay amaba seddex laabantay. Nidaamka riyalena maaha mid wax ka qabanaaya ,wax u sii xumeeyo mooyee. Reer togdheer waxa idin soo fareen in haddii alle idinku guuleeyo talada dalka in ay noqoto arrinkaasu qodobka kowaad ee asaasiga ee waxqabadkiina kow u noqda. Waxay reer togdheer na soo fareen in asaaska dhaqaale ee dalkanu hu dhisanyahay xoolaha nool, gaar ahaanna gobolka togdheer. Waxay ogyihiin reer togdheer in siyaaasadaa musuqmaasaq ee ee ku baahday maamulkanu u gayeysiiyay ummaddii in nidaamkii ganacsi ee xoolaha uu siduu doono ugu tagrifalay, kootana inyar uga dhigay ay wax gaar ah la wadaagaan. Ganacsi xumidaa xooluhu waxay sii saamaysay nolol maalmeedkii dan yarta ee horeba ay u wiiqday sicirbararka Raashinka iyo shidaalka. Waxay reer togdheer na soo fareen in uu yahay arrimaha isbeddel waxqabad oo dhab ah u baaahan haddii ilaahay idinku guleeyo.
Waxay na soo fareen in maciishadda asaasiga iyo badeecadaha istraatiijiga ah, SIDA SHIIDAALKA, in cashuurta la saaray ee xaddhaafka ah , aan dib loo gelinin tacliintii , caafimaadkii, biyihii, Laguna kaabin daryeelkii shaqaalaha, hase yeeshee gacanta u gasha in yar oo kooban, ama lagu fuliyo dano gaar ah oo siyaasadeed, cashuurtaasu ma saarna inta hantiilayaasha ah ee waxay ka go,antahay oo saarantahay dadweynaha guud ee danyarta ah. Waa in ay noqoto meelaha waxa ka qabaneysaan ee uu ah tiirdhexaad isbeddelka. Waxay na soo fareen in sidaan horey idiinku soo sheegay in gobolka ay ka jirto abaar baahday aanay ugu darantahay biyo la,aan..oo ilaahay hadii aanu inaga soo qaboojin ,durbaba ay bilaabmatay biyo dhaamis. Waxay na soo fareen in ceelashii Burco ee biyaha badnaa AY mishiinadii habeenba mid ka fadhiisanaayo, Iska daa wax uu biyo dhaan wax ka taro, ee dadweynihii magaala madaxda deganaa inta badan ay oon iyo harraad ku jirto . Boqolkiiba 80 magaalada waxa waraabiya booyado ka soo dhaamiya ceelal dad gaar ah leeyihiin(PRIVATE) ,oo waagii beryaba sicirka qiimaha kiciya, yidhaahdana shidaalkii iyo raashinkii ayaa nagu kacay. Taasuna ay wax sii yeeshay danyartii awalba baahido haysay.Waxay na soo fareen reer togdheer in shirweynaha uu ka soo baxo Qaylo dhaan ku saabsan arrimaha abaaraha ee goblka iyo guud ahaanba dalka ka taagan’.
Kayse Maxamed X. Xuseen Gobolka Sool:- “Bulshada reer Sool xaalada ka jira waynu iska garanaynaa waxa uu isii dheer geedka xididka tiinka la yidhaahdo oo Cabdilaahi Yuusuf iyo Cadde Muuse waxanaan rajaynaynaa in Kulmiye marka uu ku guulaysto inuu ka guri doono .
Anigu waxaan rabaa aniga oo qof keliya ayaa waxaa qabtay. Waxaan idiin balan-qaadayaa degmo kasta oo gobol kasta ka tirsan inaan keeno qalabka ugu dambeeyo ee dadka lagu daweeyo. Waxaan idiin balan qaadayaa lacagta lagu dawaynayo cudurada TB-da, Malaariyada aanu keeno annagu iyada oo aan dawladu bixinayn. Waxaan idiin balan-qaadayaa haddii Xisbiga Kulmiye ku guulaysto doorashada laga dhigo bilaash waxbarashada. Haddii aan doorashada ku guulaysano waxaanu balan-qaadaynaa in iskuul kastaaba yeesho Computer Lap, John Canady-ba markii uu yidhi Dayax-gacmeed baan samaynayaa waa lagu qoslay anigana ha laygu qoslo maanta. Markii aan Jaamacadda Boorame aan keligay idhi waan samaynayaa waa layla yaabay, maantana waxa dhigta in ka badan 400 oo Arday dee dawladna ma ihi ee shicib baan ahay, waanaad aragtaan in dayaxii la gaadhay.
Gudoomiyaha Garabka Haweenka ee xisbiga Canab Cumar Illeeye, oo iyaduna munaasibadaa ka hadashay ayaa tidhi;- “Ilaahay raga wax ha kaga duwo raga kaalinta haweenka. Mujtamaca ugu badan baanu nahay intaas oo ragi maxay iigu wada horaysay, haddii aanan xigmad igu fadhiyin. Waxa gacan bidix looga maarmay bal noo sheega. Durbaankii waanu soo nacnay taladii dalka ayaanu rabnaa. Laakiin, wax baanu xeerinaynaa, dumar badan waan abaabuli lahaa oo kasban lahaa. Haddaba, waxaan leeyahay ragow xataa xubin aanu lahayn baad meesha ka qaadeen, waar ma rabno inaynu isu fiirsanee, dur baankii waanu iska nacnay, mushxaradiina waa la mid ee na siiya xaqayaga. Dumarku waxay jecel yihiin inay raaxo helaan nolol fiican ku noolaadaan. Ragguna waxay rabaan kursi, waar hadaad na ha gaajin waydaan anna idin hagaajin mayno. Marka doorashadu gaadho qaar waxay yidhaahdaan jaadkii xalay baa igu qaloocday, subaxii ilaa galabtii waanu taaganahay oo ma daalo ilaa nala eryo. Insha alaah Ilaahay ha innagu guuleeyo.” .
Liibaan Maaweel Shire Somaliland.Org This entry was posted in News. Bookmark the permalink.	Comments are closed.